Staphylococcus amin'ny orona
Ny staphylococcus dia karazana bakteria izay iray amin'ireo bakteria goavana indrindra manerana ny planeta, izay iainan'ny olona isan'andro isan'andro amin'ny fiainana andavanandro, ary ny ankamaroan'ny mponina no miteny azy ireo. Amin'ny ankapobeny dia misy karazany 30 ny staphylococci, ny antsasany dia afaka miaina am-pilaminana ao amin'ny vatana. Ny karazana telo amin'ireny micro-organismes ireny dia heverina fa mampidi-doza, mety amin'ny toe-javatra sasany mety hiteraka fahasembanana goavana sy fandrahonana: gold, epidermal and staphylococci saprophytic.
Ny fizotry ny fifindran'ny aretina dia mety hivoatra noho ny fampidirana ny microflora manokana miaraka amin'ny fihenan'ny hery fanefitra na ny fitsangatsanganana tafahoatra, ary koa amin'ny aretina mihoam-pampana, rehefa miditra ny taolan'ny organ izay tsy tokony ho izy. Ny fomba fiasa amin'ny staphylococcus dia samy hafa: sakafo, fifandraisana, aviavy, intrauterine, sns. Ny faharesena amin'ny orona dia matetika mahatonga ny aureus staphylococcus sy epidermaly.
Ny soritr'aretin'ny staphylococcus amin'ny orona
Ny famolavolana sy ny fampitomboana ny tsiranoka nasalika, ny bakteria dia miteraka fihetsiketsehana manaraka:
Ny fitambaran-tsakafo be dia be, izay mahazo karazana manaparitaka;
tsinontsinona, mibontsina ny moka nasala sy ny nasopharynx;
pustules amin'ny orona (indraindray);
Amin'ny tranga sasany, dia mety hiteraka aretim-pivalanana ny mikraoba, miaraka amin'ny soritr'aretina toy ny jihitra, ny orona maina, ny tsy fisian'ny fofona. Ny fahakiviana ny hatsiaka mahazatra vokatry ny staphylococcus dia ny sinusitis , ny fanaintainana eo anoloana, ny tonsillitis, ny pnemonia.
Mamafy amin'ny orona amin'ny staphylococcus aureus
Ny fomba lehibe indrindra amin'ny fitsaboana staphilococcal infection dia ny famafazana fitaovana entina avy amin'ny lafy ny havokavoka nasiana (lavenona avy amin'ny orona). Alohan'ny fanadihadiana, mba tsy hahazoana vokatra tsy azo antoka, tsy tokony hosasana ny orona, ary ampiasaina ny fanafody nasiana fanafody. Rehefa maka lavenona avy amin'ny orona ny totozy totozy iray dia apetraka ao anatin'io akorandriaka tsirairay io, ary manosika mora foana manoloana ny rindrin'ny vozona nasala, ny fanangonana ny fitaovana.
Ny fitsipika momba ny staphylococcus amin'ny orona dia heverina ho singa iray mihoatra ny 104 cfu / ml. Na izany aza dia tokony ho raisina ao an-tsaina fa na dia misy bakterium amin'io karazana io aza dia hita amin'ny isa maromaro kokoa, raha tsy misy marika famantarana ny aretina, tsy tokony hisy fitsaboana tokony hatao. Mampalahelo fa ny fitsaboana antibiotika momba ny fitsaboana ny staphylococcus (fa tsy ny fivoaran'ny staphylococcale infecteurs!) Mbola diso ihany ny fahadisoana ara-pahasalamana, noho ny tsy fahampian'ny aretina ny marary ary ny fifandanjan'ny mikroflor ao amin'ny vatana dia manelingelina.
Ahoana no fomba fitsaboana staphylococcus amin'ny orona?
Ny fitsaboana ny areti-mifindra staphilococca, ao anatin'izany ny orona, dia tsy mora ny asa, izay vokatry ny fahaiza-manan'ireto micro-organisms ireto mba hampiroborobo haingana ny fanafody antibiotika. Noho izany, alohan'ny fanendrena ny fitsaboana, dia tsy maintsy manao fitiliana bakteriolojika ny fijerena ny fahatsapana ny mpitsabo mpanentana amin'ny fanafody iray na iray hafa. Na dia ny antibiotika antibiôtika amin'ny fitsaboana ny tsindrona staphylococcale voamarina ao amin'ny orona aza dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny tranga tena goavana indrindra. Ny fomba tsara indrindra amin'ny fitsaboana an'io aretina io dia ny fitsaboana amin'ny immunostimulation na antimikrobia eo an-toerana, izany hoe ny fanendrena ireto fanafody manaraka ireto:
Nasal Spray IRS-19 - fiomanana miorina amin'ny lysate bakteriale, izay mampiroborobo ny fampiatoana ny famokarana antikoly fiarovana.
Solika Staphylococcal bacteriophage dia fiomanana ahitana viriosy manokana izay afaka mamono sela staphylococcus.
Ny dipoavatra nasalika Bactroban dia antibiotika eo an-toerana manohitra ny staphylococci sy ireo aretina hafa izay miaina ao amin'ny orona ary mahatonga ny fizotry ny aretina.
Vahaolana amin'ny alkaola Chlorophyllipt - fanomanana amin'ny fototra voajanahary, manimba ny staphylococci, izay manohitra antibiotika.
Ho an'ny fitsaboana staphylococcus amin'ny orona, ilaina ihany koa ny manasa ny orona amin'ny vahaolana saline, amin'ny tranga sasany - ny fampiasana ny vassoconstrictor ny rano sy ny solitany, ary koa hanatsarana ny tsy fahampian'ny hery.
Tachycardia - fanampiana voalohany ao an-trano
Ny osteochondrosis breast - ny soritr'aretina izay tsy fantatra amin'ny rehetra
Ny homamiadan'ny kôlônina - soritr'aretina
Fihetseham-batana taorian'ny fitsaboana amin'ny gripa
Pneumonie viral - fitsaboana
Ny tongony na ny tongotra
Inona no manampy an'i Mexidol, ary ahoana no fomba ampiharana tsara ny endri-tsakafo rehetra?
Cirrhose - soritr'aretin'ny vehivavy
Isika dia mitondra tsiro: sakafo amin'ny aretina ao amin'ny pancreas
Ny habetsaky ny tranonjaza - ny soritr'aretina
Lambrikena avy amin'ny organza
I Megan Markle sy Prince Harry, izay nitazona tanana, dia niseho an-kalamanjana
Fofona elita ho an'ny vehivavy
Fandroana ho an'ny alika kely
Haniry tantely - toetra tsara
Firy ny kaloria amin'ny labiera?
Duphaston tsy fahampian-tsakafo
Ahoana no iombonan'ny lehilahy?
Sasha Peters no matavy!
25 antony tsy hahatongavana any Birmingham